My haircare routine~~ - ♥ ♥ MY GREEN LIFE ♥ ♥
# Beauty # Body and Skin care
My haircare routine~~
by Phyu Lwin on July 04, 2017
Hello everyone 👋👋
This is time for sharing something special here 💥💥💥
ဒီနေ့တော့ အားလုံးကို ကျမရဲ့ Haircare routine အကြောင်းလေး နည်းနည်းပြောပြချင်လို့ပါ ...။ သုံးဖြစ်နေတဲ့ Hair products တွေလဲ share ရင်း ဆိုပါတော့ ..။
ဟိုတလောက ကျမဦးရေပြားနဲ့ ဆံပင်ပြဿနာတွေဖြစ်လိုက်သေးတယ် ..။ ဦးရေပြားယားတာနဲ့ ဆံပင်ကျွတ်တဲ့ပြဿနာပေါ့ ..။ အဲဒီတုန်းက ဆံပင်တွေကျွတ်သွားတာများ ကတုံးဖြစ်ပြီလို့ကို ထင်လိုက်တာ ...။ အခုတော့ ပြန်ဂရုစိုက်လိုက်တာ တော်တော်ပြန်ကောင်းသွားပါပြီ ..။ ဆံပင်လည်းမကျွတ်၊ ဦးရေပြားလည်းမယားတော့သလို ဆံပင်အသစ်တွေလည်း အများကြီးထပ်ထွက်တယ် ..။ ရှိပြီးသားဆံပင်တွေလည်း ပြန်သန်လာလို့ ဆံပင်စည်းရင် တော်တော်ကြီးတဲ့ပမာဏကို ဖြစ်နေပါပြီ ...။
ဦးရေပြားခြောက်၊ ယားပြီး ဆံပင်တွေကျွတ်တုန်းက အမျိုးမျိုး ကြိုးစားကြည့်ပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာ Apple cider vinegar က ကျမရဲ့ ဆံပင်တွေကို ကယ်တင်သွားခဲ့တယ် ...။ vinegar နဲ့ ရေကို ဆတူရောပြီး အမှုန်သေးသေးလေးတွေထွက်တဲ့ spray ဗူးထဲကိုထည့်ပြီးမှ ခေါင်းမလျှော်ခင် ဆံပင်ကို ဖြန်းတာပါ..။ ပြီးတာနဲ့ နာရီဝက်လောက်ထားပြီး ခေါင်းလျှော်လိုက်တာပါပဲ ..။ ဦးရေပြားခြောက်ပြီးယားတာက ဗောက်ထတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလို မှို၊ ဗက်တီးရီးယားကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်တာမို့ ဆေးခန်းမှာပြပြီး သေချာ Treatment ယူလိုက်ရင် ကိုယ်ဖြစ်တာနဲ့ ဆေးနဲ့မြန်မြန်တွေ့ပြီး မြန်မြန်ကုနိုင်တာပေါ့..။ အဲဒီတုန်းက ဆေးခန်းသွားပြသေးတယ် ..။ ဒါပေမယ့် အဲဒီနေ့က အရေပြားဆရာဝန်မရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတာနဲ့ နောက်ရက် ဆရာဝန်ရှိတဲ့အချိန်မှ သွားပြမယ်ဆိုပြီး ပြန်လာခဲ့ရတာ ..။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ အင်တာနက်မှာ ရှာဖတ်တော့Apple cider vinegar ကို တော်တော် recommend ပေးကြတာနဲ့ သုံးလိုက်ရင်း အဆင်ပြေတာနဲ့ပဲ ဆေးခန်းကို သွားမပြဖြစ်တော့ဘူး ...။ review တွေမှာ ရေးကြတာတော့ တစ်ပတ်ကို ၂ ခါ ၃ခါ လောက်နဲ့ ၃ လလောက်သုံးလိုက်ရင် အဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီး ပြောကြတယ် ..။ တကယ်လည်း အဲလောက်ပါပဲ ..။ အစ ၃ လ လောက်ကတော့ တစ်ပတ် ၂ ကြိမ်လောက်သုံးဖြစ်တယ် ..။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ကနေ အခုဆိုရင် လုံးဝကောင်းသွားလို့ မသုံးတော့သလောက်နီးပါးဖြစ်သွားပါပြီ ..။ vinegar ဆိုတော့ သူကလည်း အက်ဆစ်တစ်မျိုးပဲမို့ တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတာ ရှိတယ်မလား..။ တကယ်က ဒီလိုမျိုး treatment တွေက မြန်မာ့ရိုးရာနည်းလမ်းတွေမှာ ရှိပြီးသားပါ ..။ ကျမတို့ငယ်ငယ်ကဆို အဘွားတို့ အမေတို့က ဦးရေပြားသန့်ရှင်းအောင် တရော်ကင်ပွန်းခေါင်းလျှော်ရည်ထဲမှာ ရှောက်သီးစိတ်တွေ ထည့်လျှော်ကြတာလေ..။ အက်ဆစ်ဓါတ်က မှိုတို့ ဗက်တီးရီးယားတို့ကို သေစေတယ်လို့ ဆိုကြတာကိုး ..။
ဒီခေါင်းလျှော်ရည်လဲ သုံးခဲ့သေးတယ် ...။ မြန်မာမှာ တစ်ခါဖြစ်တုန်းက nizoral shampoo လားမသိ ဗောက်ပျောက်တဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်သုံးတာ တော်တော်အဆင်ပြေတယ် .။ ဗောက်လဲပျောက်တယ် ..။ ဒီခေါင်းလျှော်ရည်ကလည်း nizoral shampoo လိုပဲ ခေါင်းပေါ်စပ်ဖျင်းဖျင်းခံစားရပြီး ဗောက်ပျောက်တယ်.။ ပိုးသေစေတယ် ..။ အခုတော့ ဘာမှမဖြစ်တော့လို့ ဒီခေါင်းလျှော်ရည်လည်း သုံးစရာမလိုတော့ပါဘူး..။
ဆံပင်ကို ဂရုစိုက်တဲ့အခါမှာ ခေါင်းလျှော်တာနဲ့ ခေါင်းဖြီးတာက တော်တော်အရေးပါတယ်လို့ မြင်ပါတယ် ..။ ဂျပန်မှာတော့ မိန်းကလေးတိုင်းလိုလို နေ့တိုင်းခေါင်းလျှော်လေ့ရှိကြပါတယ် ..။ ဦးရေပြားဆိုတာလည်း အရေပြားပဲမို့ ပုံမှန်သန့်ရှင်းစေသင့်တယ်လို့ ကျမလည်း ထင်တယ်လေ ..။ မြန်မာမှာတော့ ရှေးကအယူအဆအတိုင်း period ကာလမှာ ခေါင်းမလျှော်ရဘူးတို့ ဘာတို့ တော့ ရှိတာပေါ့လေ..။ တကယ်က ခေါင်းအအေးပတ်မှာစိုးပြီး ပြောကြတာပါ ...။ ဆံပင်တွေလည်း အပူကြောင့်မပျက်စီးရအောင် အပူနဲ့ blow drying လုပ်တာမဟုတ်ဘဲ သေချာလေး အခြောက်ခံမယ်ဆိုရင် အအေးပတ်မှာလည်း စိတ်ပူစရာမလိုဘူးထင်တယ် ..။ ဒါပေမယ့် တစ်ပတ်မှာ ခေါင်း ဘယ်နှစ်ကြိမ်လျှော်သင့်လဲဆိုတာတော့ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တူကြမှာမဟုတ်ပါဘူး..။ အချို့က ဦးရေပြားအဆီအရမ်းထွက်တော့ ခဏနဲ့ခေါင်းက အနံ့ထွက် စီးကပ်ကပ်ဖြစ်လို့ နေ့တိုင်းလျှော်သင့်ပေမယ့် အချို့တော့လည်း ၂ ရက်လောက်ကြာမှ အဆီထွက်တာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ် ..။ ကိုယ့်ရဲ့ဆံပင် ဦးရေပြားက လျှော်သင့်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတာတော့ အားလုံးလိုလို ခံစားမိတတ်ကြပါတယ် ..။ အရေးကြီးဆုံးက ဆံပင်တွေစီးကပ်ပြီး အနံ့တွေထွက်နေတာမျိုးက ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ကျစေတာမို့ လိုအပ်သလို ခေါင်းလျှော်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ် ..။ ကျမအတွက်ကတော့ နေ့စဉ်လျှော်ဖို့ မလိုပေမယ့် တစ်ရက်ခြားတစ်ခါ လျှော်မှ အဆင်ပြေပါတယ် ...။ ခေါင်းခဏခဏလျှော်လို့ ဦးရေးပြားခြောက်သွေ့ပြီး ဆံပင်ပျက်စီးစေတယ်ဆိုတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး..။ ခေါင်းလျှော်ရည်ကို ပြောင်စင်အောင် ဆေးဖို့ပဲ အရေးကြီးတာပါ .. ။ ဦးရေပြားက ဘာချေးညှော်မှ မရှိဘဲ သန့်ရှင်းနေရင် ဆံပင်တွေသန်စွမ်းဖို့ အထောက်အပံ့ပေးပါလိမ့်မယ် ..။
ခေါင်းလျှော်ရည်ရွေးတဲ့အခါမှာ ကျမအနေနဲ့ ဦးရေပြားကိုခြောက်သွေ့ယားယံမှုမဖြစ်စေတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်မျိုးကို ရွေးသုံးပါတယ် ..။ sulfate, silicon မပါတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်မျိုးတွေကို သုံးပါတယ် ..။ အဲဒီခေါင်းလျှော်ရည်က ဘာတွေလဲဆိုတာတော့ Blogger တိုင်းလိုလို ပြောပြနေကျဆိုတော့ စာရှည်သွားမှာစိုးလို့ မပြောတော့ပါဘူးနော် ..။ အခုသုံးနေတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်တံဆိပ် ၂ မျိုးရှိပါတယ် ..။ Botanist shampoo ရယ် reveur shampoo ရယ်ပါ ..။ ၂ မျိုးစလုံးက natural ingredients တွေနဲ့ပဲ ထုတ်ထားတာကြောင့် chemical နည်းတော့ ထိခိုက်မှုနည်းတာပေါ့နော် ..။ အနံ့လေးတွေကလည်း မပြင်းဘဲ သင်းသင်းလေးတွေဆိုတော့ ကျမအရမ်းကြိုက်တယ် ..။
ဂျပန်မှာက recycle ကို အရမ်းဦးစားပေးတော့ တော်တော်များများ refill တွေရှိတယ်..။ reveur shampoo က refill အထုတ်ဝယ်ပြီး ရှိတဲ့ ဗူးအဟောင်းထဲထည့်ထားတာမို့ သူ့ website က ပုံကိုကူးပြီး အားလုံးသိအောင် ပြထားတာပါ ...။ သူက volumizing လည်း ပါတာကြောင့် ကျမဆံပင်တွေ ထူနေသလိုမျိုးဖြစ်နေသလားတော့ မသိပါဘူး..။ အဲခေါင်းလျှော်ရည်ကိုထည့်ထားတဲ့ အနီရောင် Tsubaki shampoo ဗူးကလည်း ဂျပန် shampoo brand တွေထဲ လူကြိုက်များတဲ့ တံဆိပ်တစ်ခုပါပဲ .။ သူလည်း ကောင်းတော့ကြိုက်ပါတယ်...။ ဒါပေမယ့် တစ်ဗူးဆိုအကြာကြီးသုံးရတာဆိုတော့ တံဆိပ်တစ်ခုကုန်သွားရင် နောက်ထပ်အသစ်ပဲသုံးချင်တာနဲ့ ဒါကို ဆက်မဝယ်ဖြစ်တော့တာ ..။
Hair treatment ကို Lolane တစ်မျိုးပဲသုံးဖြစ်တာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၀ ဝန်းကျင်လောက်ကတည်းကဖြစ်မယ်ထင်တယ် ..။ အခြားတံဆိပ်တွေသုံးခဲ့ပေမယ့် ဆံပင်ကို ပျော့သွား ရှင်းသွားတယ်လို့ မခံစားရဘဲ ဒီ Lolane တစ်ခုပဲ စိတ်ကြိုက်တွေ့တာကြောင့် ဒါကိုပဲ နှစ်ရှည်လများသုံးဖြစ်နေခဲ့တာ..။ ဒီ ၂ ဗူးကို မြန်မာပြန်တုန်းက တကူးတက သယ်လာခဲ့တာ..။ ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့မလျှော်ခင် ဆံပင်အဖျားတွေကို treatment လိမ်းပြီး shower cap နဲ့ ဆယ်မိနစ်လောက်ပေါင်းထားလိုက်တယ် ..။ ပြီးမှ ဆံပင်အရင်းကို ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ လျှော်တယ် ..။treatment အရင်သုံးပြီး ခေါင်းလျှော်ရည် နောက်မှသုံးတာက ၂ မျိုးစလုံးကို စင်အောင် ပိုလျှော်နိုင်တယ်လို့ ခံစားရတယ် ..။ အရေးကြီးဆုံးက treatment က ဆံပင်အရင်းတွေကို သုံးစရာမလိုပါဘူး..။ ပြန်ဆေးတဲ့အခါမှ အလုပ်ရှုပ်ပြီး စင်အောင် မဆေးနိုင်ခဲ့ရင် ဗောက်ထတာမျိုး ဖြစ်စေတတ်လို့ပါ ..။
Hair tonic လည်း အခုနောက်ပိုင်းတော့ သုံးဖြစ်ပါတယ် ..။ Kaminomoto ဆိုတဲ့ ဒီတံဆိပ်က ထိပ်ပြောင်နေတဲ့သူတောင် ဆံပင်ပြန်ပေါက်စေတယ်ဆိုပဲ ..။ ဆံပင်ကို ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး အရှည်မြန်စေပါတယ် ..။ ဈေးကတော့ ဒီဗူးက ယန်း ၁၆၀၀ လောက်ပေးရတယ် ..။ ၃၅၀၀ တန်လောက်လည်း ရှိပါတယ် ..။ ဒီမှာတော့ တော်တော်များများသုံးကြတယ် ..။ ဆံပင်သန်အောင် သုံးကြတာပါ ...။ မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ် လိမ်းရတာပါ ..။ အဆီမဟုတ်ဘဲ အရည်ဆိုတော့ ဆံပင်ကို စီးကပ်ကပ်မဖြစ်သွားစေပါဘူး..။ ဒါကြောင့်များ ကျမဆံပင်အရှည်မြန်လာသလားတော့ မပြောတတ်ပေဘူး..။ အားလုံးပေါင်းစုံသွားတာကြောင့်လည်း ပါပါလိမ့်မယ် ...။
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Hair serum ပါ ..။ ဒီတံဆိပ်လေးကို ကြိုက်လို့ လိမ်းလိုက်ရင် ဆံပင်ကို စီးကပ်ကပ်မဖြစ်စေလို့ ဒါကို မြန်မာကနေ ဝယ်လာခဲ့တာ..။ မြန်မာမှာရောင်းသမျှ Hair serum တွေထဲ ဒီတံဆိပ်ကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲ ..။
ဆံပင်က လူတွေရဲ့ နောက်ထပ်မျက်နှာတစ်ခုလို့ တင်စားကြပါတယ် ...။ လူတိုင်း အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတိုင်း ဆံပင်ထူထူအိအိ သန်စွမ်းတာမျိုးပဲ လိုချင်ကြတာမလား ...။ ရေးရင်းနဲ့ အရမ်းများနေလို့ အနှစ်ချုပ်ပြောပါရစေနော် ...။
ဆံပင်သန်ချင်ရင် လိုအပ်သလို ခေါင်းလျှော်ပါ...။ သင့်လျော်တဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်သုံးပါ ...။ ပျော့ဆေးပေါင်းဆေးသုံးရင် ဆံပင်အဖျားကို အဓိက ထားသုံးပေးပါ ..။ အားလုံးကို စင်ကြယ်အောင် လျှော်ပါ ..။ ခေါင်းလျှော်ပြီး တဘက်နဲ့ ပေါင်းထားတတ်သူဆိုရင် ဆံစပ်တွေကို တင်းနေအောင် မဆွဲထားမိပါစေနဲ့..။ စိုနေတဲ့မအချိန်မှာ ဆံပင်တွေ ပိုကျွတ်စေတတ်လို့ပါ ..။ တဘက်နဲ့ အတင်းဆွဲမသုတ်ပဲနဲ့ သေချာလေး ခါပြီးတော့ cold drying ပဲ လုပ်ရင် အကောင်းဆုံးပါ ..။Hair serum သုံးပါ..။ အပြင်သွားရင် ထီး၊ ဦးထုပ်ဆောင်းပါ ဒါမှမဟုတ် နေပူထဲသိပ်အကြာကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုရင် sunscreen spray ဖျန်းပါ ...။ Omega 3, nuts တွေ များများစားပေးပါ ..။ အာဟာရမျှတအောင် စားပါ ..။ ကျမတော့ ငါးကြီးဆီလည်း ပုံမှန်စားပါတယ် ..။ ငါးလည်းအစားများပါတယ် ...။ အစေ့အဆန်တွေလည်း ကြိုက်တော့ အမြဲတမ်းမဟုတ်ပေမယ့် စားဖြစ်ပါတယ်...။
ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပါပဲနော်..။ အများကြီးရေးလိုက်မိတာ အချိန်တော်တော်ကြာသွားတယ် 😬😬😬
See you later 💞💤💤💤
Labels: Beauty, Body and Skin care
ဆံပင်အကြောင်းဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားလို့ လာဖတ်သွားတယ်နော်.. Apple Cider အကြောင်းကို ဖတ်ဖူးတယ်.. တခါမှတော့ မလုပ်ဖူးဘူး.. ကိုယ့်မှာက ဗောက်မရှိဘူး.. ဆံပင်တော့ ကျွတ်တာ အရမ်းပဲ.. ခုတောင် Biotin ပါတဲ့ Shampoo လေး ကယ်နေလို့ နည်းနည်းနေသာတာ.. ရှယ်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်တယ်နော်
5 July 2017 at 16:26
တကူးတက လာဖတ်ပေးလို့လဲ ကျေးဇူးပါ ကန်ဒီရေ <3
5 July 2017 at 16:55
Thanks for sharing. Could you please check which link is the product that you are using
7 July 2017 at 05:02
The two products in the link you described were not exactly the same with the one I am using. But there are many hair products produced by Kaminomoto and Japanese people here usually pick the one according to their hair problems. For my case, because of scalp problem that tended to become weak hair, I chose one for higher strength.
But I am not sure whether you can get all Kaminomoto products in watson, may be they just sell the ones people normally need and use.
Thank you for your kind visit <3
7 July 2017 at 06:45
The name appeared in place of post creator is exactly my real name :) Here, I just write nothing special but something interesting to me.
My Creations.. :D
All about coffee ~~
Blog update @@
♥♥♥ မောင် ♥♥♥
My Favorite Songs ^^
My Own Feelings
Short stories of Love
Copyright © 2012 Sweety Snow. Powered by Blogger.
ညက မအိပ်ခင် စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်မယ်စိတ်ကူးမိတာနဲ့ ဆရာမ # ဂျူး ရဲ့ # ချစ်သူလား_စကားတစ်ပွင့်_ပွင့်ခဲ့တယ် ကို ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အတိအကျမပြောတတ်တေ...
My Lovely Friends ^^
Total Lovely Guests !! :-**
Subscribe by Mail.. :)
Photo for Today :-**
I Just ♥ Writing,, Nothing Special xD
အပြုံးနဲ့ ဆုံးတဲ့နိဂုံး ~~
“ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်တွေ မင်းကိုပြောပြမယ် ” လို့ဆိုလေတော့ သူပြန်ပေးတဲ့အဖြေတစ်ခုဟာ သူမရဲ့ သူ့အပေါ်အထင်တကြီးရှိမှုကို ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ် ...
ကိုယ့်ရဲ့ ၃၅ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဟာ အလုပ်တွေကြားမှာ တိတ်ဆိတ်စွာ ဖြတ်သန်းဖြစ်ခဲ့တယ် ..။ အရင်ကတော့ အဲဒီရက်မှာ ကိုယ့်ခံစ...
Ushiku Daibutsu +++
အားလုံး မင်္ဂလာပါနော် ..။ ဒီနေ့တော့ ဘုရားဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကို share ချင်ပါတယ် ..။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ နောက်ဆုံးပတ်ထဲမှာ တိုကျိုကို သ...
Current Obsessions ~~~
ဒီနေ့ သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့လေ...။ လပြည့်နေ့မတိုင်ခင် ညကတည်းက မနက်ခင်း ဆွမ်းလောင်းဖို့ အမေဟင်းချက်တာ ကူညီပေးတယ်..။ မနက်စောစော ဆွမ်းလော...
အခုတလော စာတွေ ပြန်ဖတ်ဖြစ်နေရာက ဆရာမင်းလူရဲ့ စာအုပ်တွေ အားလုံးဖတ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ် ..။ ဆရာ့စာအုပ်တွေက ဟိုးအရင်ကတည်းက ဖတ်ဖြစ်ခဲ့...
ကျွန်မခမျာ အချို့သူတွေလို Facebook စွဲတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အခြားရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Youtube ကို စွဲလမ်းတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးရှိတယ်ရယ် ...။ ဘာလေးပ...
Impressive Pages !! Coolllll *_^
How to Wear Gingham asaGrown-Up
Phyo Pa Pa' Blogs
When your skin need special treatment on Weekend
Concrete Mixer Companies
Traces of Sunshine
shweBeauty (မြန်မာ Beauty & Fashion)
Awesome Visitors !!
Enjoy on Facebook !!!
Thx to all for visit.!!!